उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, पासाङ, को हुन? (जिवनि) – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
Posted on November 1, 2015 November 1, 2015 by Anand
नेपालका दोश्रा उपराष्ट्रपतिमा नेकपा एमाओबादि नेता नन्दकिशोर पुन निर्वाचित भएका छन् । प्रस्तुत छ, पासाङ नामले चिनिने पुनको छोटो जिवनि:
नाम – नन्दकिशोर पुन
उपनाम – पासाङ
जन्म – २०२२ कात्तीक ७
पिता – रामसुर पुन
आमा – मनसरा पुन
जन्मस्थान – रोल्पाको राङ्सी–९ भन्भने
नन्दकिशोर पुनको बारेमा छोटो भिडियो:
पाँच भाइमध्ये माइला नन्दकिशोर पढाइलेखाइमा खासै ध्यान दिदैनथे । तर उनको नेतृत्व क्षमता भने सानैदेखि नै देखिएको थियो। तिन कक्षामा नै उनि स्कुलको ‘मनिटर’ चुनिएका थिए। पढाइलेखाइमा खासै ध्यान नदिने भनिएका नन्दकिशोर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनिति शास्त्रमा एमए गरेका छन्। उनि कुशल सैन्य प्रशिक्षक र पार्टि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाहिने हात जस्तै हुन ।
राजनितिको साथ साथै पुन गायन र संगितमा दख्खल राख्छन । उनले धेरै क्रान्तिकारि धारका गीतहरु पनि लेखेका छन् ।
२०३६ – कक्षा ४ मा गणित नेकपा मसाल आबद्ध शिक्षक निर्मल गिरी को निकट (उनि नेकपा मसालको स्कुल अध्यक्ष थिए)
२०३९ – सात कक्षा पास गरेर सदरमुकाम लिबाङ गए पछि निर्मल गिरीले कृष्णबहादुर महरासित चिनजान गराइदिए – लिबाङ स्कुलमा विद्यार्थी समूहका अध्यक्ष भए । तेहि बर्ष अखिलको उपकेन्द्रिय उपाध्यक्ष भए पछि राजनितिमा सक्रिय भएको भन्दै लिबाङ स्कुलबाट निष्काशन गरिए। त्यसपछि उनि रोल्पाको थबाङ पुगे।
२०४१ सालमा एसएलसीपछि उनले मास्टरि गर्न थाले, आफैंले पढेको राङ्सि स्कुलमा। राजनितिमा संलग्नताको कारण केहि समय (तिन दिन?) जेल पनि परे।
२०४५ उनि दाङको घोराहिको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भर्ना भए। क्याम्पसमा उनी अखिलका अध्यक्ष चुनिए।
२०४६ मा पार्टि राजनितिमा प्रवेश । नेकपा मसालको जिल्ला सदस्य। २०४६ को जनआन्दोलनको बेला उनले पश्चिम रोल्पाको कमान्ड समातेका थिए ।
२०४८ – पार्टिको पुर्णकालिन कार्यकर्ता भए – त्यहि बर्ष नेकपा एकता केन्द्रको एकता महाधिवेशनअघि रोल्पा जिल्ला सम्मेलनमा कमिटिमा पनि चुनिए। सोहि वर्ष उनि भुमिगत भएका हुन ।
२०५१ मंसिर ९ ल्पाको इरिवाङको चप्का मेलामा उनि पुलिसको गोलि लाग्नुबाट जोगिएर भागेका थिए – त्यस पछि स्थानीय प्रशासनले उनको टाउकोको मुल्य ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो।
२०५२ मा सशस्त्र जनयुद्ध शुरु हुँदा उनि माओवादि रोल्पा जिल्ला समिति सदस्य थिए। उनि युद्धको थालनि गर्दाको लडाकु दलको कमाण्डर छानिएका थिए ।
२०५५ – नन्दकिशोर जनयुद्धको तयारि हुँदै गर्दा वाइसिएल रोल्पा अध्यक्ष र प्रशिक्षक थिए । उनि लडाकु दल कमान्डर हुँदै २०५५ मा उनकै कमान्डमा ‘टास्कफोर्स’ बन्यो।
२०५६ मा छापामारको पहिलो कम्पनी कमान्डर भए। त्यसपछि बटालियन, बिग्रेड र डिभिजन हुँदै चार डेपुटी कमान्डरमध्ये एक छानिए। २०५६ चैत २१ गते रुकुमको तकसेरास्थित इलाका प्रहरि कार्यालय हमला गर्दा प्रहरिले चलाएको गोलि उनको आँखा नजिकैबाट गएको थियो। उनि अझै पनि सो आँखाले राम्रोसंग देख्दैनन
२०५८ फागुन ४ गते अछामको मंगलसेन आक्रमण नन्दकिशोरकै कमान्डमा
२०६१ चैत्र ७ गते म्याग्दी सदरमुकाम माथिको आक्रमण
जनमुक्ति सेना सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनी जनमुक्ति सेना प्रमुख भए।
२०६९ चैत २४ राति रोल्पाको नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमण उनकै योजना र कमान्डमा भएको थियो ।
२०६९ जेठ १७ मा दुबै मृगौला काम गर्न नसक्ने अबस्थामा अस्पताल भर्ना गर्नु पर्यो बिरामी अवस्थामै दोश्रो संविधान सभाका लागि काठमाडौंक्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारे ।
२०७२ कार्तिक १४ मा उप-राष्ट्रपति
This entry was posted in People, Politics and tagged Nandakishor Pun, Vice President. Bookmark the permalink.
← नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको परिचय
हाम्रा नेताहरु कस्ता घरमा बस्छन ? →